အကြမ်းဖက် စစ်တပ်က ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုဂျင်မီကို အကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေဟု စွပ်စွဲ - Myanmar Pressphoto Agency
အကြမ်းဖက် စစ်တပ်က ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုဂျင်မီကို အကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေဟု စွပ်စွဲ
နိုင်ငံတော်အာဏာကို အကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းထားသည့် စစ်ကောင်စီက ၈၈ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့စည်းမှ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုကျော်မင်းယု ခေါ် ကိုဂျင်မီကို အကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေကြောင်း နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့ ညပိုင်းက အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ပိုင် ဝါဒဖြန့်မီဒီယာမှ တဆင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ကိုဂျင်မီကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ ၎င်းတိမ်းရှောင်ရာ နေအိမ်တစ်ခုတွင် အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က မတရား ဖမ်းဆီးခဲ့ကာ ဖမ်းဆီးခံရပြီး ၁၇ ရက်ကြာမှ ယခုကဲ့သို့ သတင်းထုတ်ပြန်လာခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
ကိုဂျင်မီကို AK 47 သေနတ် ၆ လက်၊ M 16 သေနတ် ၈ လက်၊ ၁၂ ဗို့ သေနတ် ၂ လက်၊ တူမီးသေနတ် ၁ လက် ကျည်အိမ် ၁၈ ခုနှင့် ဖမ်းဆီးရမိခြင်းဖြစ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
ကိုဂျင်မီသည် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ၏ နိုင်ငံရေးနှင့်လုံခြုံရေး အကြံပေးတာဝန်ယူထားပြီး အကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသူဖြစ်ကြောင်း အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က စွပ်စွဲထားသည်။
ကိုဂျင်မီကို ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာလ၂၃ရက်နေ့ ညပိုင်းတွင် အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ၎င်းတိမ်းရှောင် နေသည့် ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ပင်လုံအိမ်ရာတွင် ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါအိမ်ရာအနီး နေထိုင်သူအချို့၏ ပြောဆိုချက်အရ စစ်တပ်က မတရားဖမ်းဆီးစဉ် ကိုဂျင်မီသည် ဦးခေါင်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကိုဂျင်မီဖမ်းဆီးခံရပြီး တစ်ရက်အကြာ အောက်တိုဘာလ ၂၄ရက်နေ့တွင် ဖမ်းဆီးစဉ်က ရရှိသော ဒဏ်ရာများကြောင့် မင်္ဂလာဒုံစစ်ဆေးရုံတွင် ဆေးကုသမှုခံယူနေကြောင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။
ထို့ပြင် အဆိုပါဒဏ်ရာများနှင့် ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်မှုကြောင့် ကိုဂျင်မီသေဆုံးပြီဆိုသည့် သတင်းများလည်း ထွက်ပေါ်ခဲ့သေးသည်။
ကိုဂျင်မီကို ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၀၅-က အပြင် ၂၀၁၄ ခုနှစ် အကြမ်းဖက် တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၁၂၄၊ မတရားအသင်းအက်ဥပဒေ၊ လက်နက်နှင့် ပတ်သက်သောအက်ဥပဒေ၊ ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ဝတ္ထုပစ္စည်းများအက်ဥပဒေတို့ဖြင့် အရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
#NUG #၈၈မျိုးဆက် #ကိုဂျင်မီ #MPA
Terrorist SAC Accuses 88th Generation Student Leader Ko Jimmy of Terrorist Activities
The terrorist military which took the state power has accused Ko Kyaw Min Yu (Ko Jimmy), the 88th Peace and Open Society leader, of doing terrorist activities, on November7evening, through the terrorist military-owned media.
Ko Jimmy was unjustly arrested by the terrorist military atahome he was escaping at and this announcement came after 17 days of arrest.
It was reported that Ko Jimmy was arrested along with6AK 47 guns, 8 M16 guns,212-volt guns, 1 single-shot arm and 18 bullet cases.
The terrorist military accused that Ko Jimmy took the role of advisor for politics and security of the National Unity Government and was doing terrorist activities.
Ko Jimmy was arrested by the terrorist military atahouse he was escaping at Pinlong housing in the north of Dagon Myothit township on October 23.
According to some who live around the housing, Ko Jimmy sustained injuries on the head while he was unjustly arrested by the military.
On October 24,aday after being arrested, Ko Jimmy was receiving medical treatment at Mingaladon military hospital for the injuries he sustained during the arrest.
Plus, there were even news that Ko Jimmy died from torture injuries.
It has been learnt that Ko Jimmy will be sued on the 2014 anti-terrorism law, the Penal Code section 124, unlawful associations act, weapons act and explosive substances act, in addition to the Penal Code section 505(a).
#NUG #88thGeneration #KoJimmy #MPA
Tags: 88thGeneration KoJimmy militarycoup MPA Myanmar
Previous: မင်းတပ်သို့ စစ်အင်အားတိုးချဲ့သည့် အကြမ်းဖက် စစ်တပ် ၄ ရက်အတွင်း ၆၀ ထက်မနည်း သေဆုံး
Next: တတိယနှစ်ကျောင်းသူတစ်ဦးကို အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်ချ